ဟစ်တလာ ဘာ့ကြောင့် ဂျူးတွေကို သတ်သလဲ? | Danya Wadi
»ဆောင်းပါးများ»ဟစ်တလာ ဘာ့ကြောင့် ဂျူးတွေကို သတ်သလဲ?
ဟစ်တလာ ဘာ့ကြောင့် ဂျူးတွေကို သတ်သလဲ?
Posted by danyawadi on July 24, 2017 in ဆောင်းပါးများ
သမိုင်းနောက်ကွယ်က သွေးစွန်းသော တနင်္ဂနွေ
( Bloody Sunday )
ဒုတိယကမ္ဘ္ဘာစစ်အစ ပိုလန်ကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခြင်း
၁၉၃၉ ခုနှစ်အစ ဂျာမန် – ပိုလန် ပဋိပက္ခမှာ ပိုလန်တွေက ဂျာမန်ပိုင်နက် အရှေ့ပရပ်ရှား ပြည်နယ် ထဲကို ပိုလန် ရဲ့ ကမ်းခြေမြို့ ဖြစ်တဲ့ ဒန်းဇစ် (Danzig) ကနေ ပိုမို ကျူးကျော် ဝင်ရောက်ခြင်းကနေ အချင်းများ ရာက ပြသာနာ ကြီးထွား လာခဲ့ပါတယ်။
ဟစ်တလာက ဒီပြသာနာအပေါ် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းဖို့ ကမ်းလှမ်း ပေမယ့် တည်ကြည်​လေးနက်စွာ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခြင်းကို ပိုလန်တွေက ငြင်းဆန် ပယ်ချ ခဲ့ပါတယ်။
ပိုလန်ထဲရှိ လူနည်းစု ဂျာမန်တိုင်းရင်းသား​တွေ လုံခြုံ့ရေး အတွက်လည်း ဟစ်တလာမှာ သောကပွေလာပြီး ဦးစားပေး စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လို့ လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၃၄ ခုနှစ် ကတည်းက အရှေ့ပရပ်ရှား နဲ့ ဒန်းဇစ်မြို့ကို ပိုလန်တွေ က ဖြတ်တောက် ထားရှိခဲ့ပြီး ဝါဆောအစိုးရက ဒီ ဆိပ်ကမ်းမြို့ကို စစ်ရေး အတွက် အရေးပါ အရာ ရောက် မှန်းသိလို့ ထိန်းချုပ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုနည်းတူပင် အနောက်ပရပ်ရှားရှိ ဆိပ်ကမ်း မြို့နှစ်မြို့ ကိုလည်း ထိုနည်းတူ ပိတ်ဆို့ထားရှိပါတယ်။
ဟစ်တလာက ပြေလည်အောင် ဆွေးနွေးဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားခဲ့ သော်လည်း မအောင်မြင်ပါ။
အင်္ဂလိပ် နှင့် ပြင်သစ် နောက်ခံအင်အား ရှိနေတဲ့အတွက် ပိုလန်က ဒီ ပြသာနာအပေါ် ခေါင်းမာပြီး ဂျာမနီ နဲ့ ကောင်း စွာ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခြင်း မပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ပြသာနာရဲ့မီးစကို မီးတောက် ဖြစ် အောင် မီးရှို့ပေးမယ့် ကိစ္စတစ်ခုကိုလည်း ဝါဆော အစိုးရက မဆင်မခြင် ထပ်မံ လုပ်လာ ပါတယ်။
အနောက်ဖက်ရှိ ပိုလန်နယ်စပ်ကို နယ်မြေ ချဲ့ထွင်တဲ့ အနေ နဲ့ အနောက်ဖက် ဘာလင်ဖက်ကို ရုတ်တရက် စီမံကိန်း ချပြီး မြေနေရာ တိုးချဲ့လာတဲ့ အပြင် ပိုလန် နိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးရှိ တိုင်းရင်းသာလူမျိုးတွေအပြင်း ဂျာမန် အခြား မျိုးနွယ်စုတွေ ကိုလည်း လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အရ စနစ်တကျ ခွဲခြား ဖိနှိပ် သတ်ဖြတ် မှု့တွေ လုပ်လာ ခဲ့ပါတယ်။
ညစဉ် လိုလို ပိုလန် နယ်စပ် တစ်လျှောက် သေနတ် သံများ ကြားကြ ရပြီး ဂျာမနီ ထဲ ပြေးဝင် ခိုလှုံ သူတွေ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုများ လာ နေပါတယ်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး မဖြစ်ခင် အချိန်တို အတွင်း မှာ ပိုလန်တွေ ရဲ့ရက်စက်မှု့ကြောင့် ဒန်းဇစ် နှင့် ဂျာမနီ နိုင်ငံအတွင်း ပိုလန် မှ ထွက်ပြေး လာသော ဒုက္ခသည် (၈၀,၀၀၀) နီးပါး ရှိနှင့် နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် စိတ်ဓာတ် ခြောက်ခြား လန့်ဖြတ်လျှက် လုံခြုံမှု့ကင်းမဲ့ နေသော ပိုလန် ထဲရှိ ဂျာမန် အနွယ်ဝင် တို့ကို ဖိနှိပ် သတ်ဖြတ် နေခြင်း ကိစ္စတွေ ပိုမို ဆိုးဝါး စွာ တိုးပွား နေခြင်း က စစ်ဖြစ်ရန် အရေးအကြီးဆုံး နှင့် တတိယ သေချာသော အချက်ကို ဖြစ်လာစေ ခဲ့ ပါတော့ တယ်။
ထိုအချိန် က ပိုလန်တွေ ရဲ့ရက်စက်မှု့တွေ ကို ကမ္ဘာ က အသေအချာ သိရှိ ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ် နှင့် ရုရှ စစ်နိုင်ခဲ့ သူတွေ ကောင်းကောင်း သိကြ ပေမယ့် အရေးမယူ မသိချင်ဟန် ဆောင် ဥပက္ခာပြု လစ်လျှူရှု့ထားခဲ့ကြ ပါတယ်။
ဒီလို နည်းနဲ့ ပိုလန် မှ ဝါဆော အစိုးရ ကို မြှောက်ထိုး ပင့်ကော် လုပ်ပေးမှု့ ကြောင့် “ဒန်းဇစ် အစုလိုက် အပြုံ လိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်း” (Danzig Massacres) ခံရမှု့သို့မဟုတ် “သွေးစွန်းသော တနင်္ဂနွေ ( Bloody Sunday)” ဟု ခေါ်ဆိုသော ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ သတ်ဖြတ်မှုကြီး တစ်ခု စစ်ကြီး မဖြစ်ခင် (၅) လ လောက် အလို ဧပြီလ၊ ၁၉၃၉ ခုနှစ် မှာ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ ပါတယ်။
လက်တွေ့သတ်ဖြတ်သူများ ကတော့ ပိုလန် စစ်တပ် က ကျောထောက် နောက်ခံ ပြုပေး ထားတဲ့ ဇိုင်ယွန်နစ် (Zionist) ဝါဒီ ဂျူး လူမျိုး တွေ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။ ဂျာမန် လူမျိုး (၅၈,၀၀၀) ကျော် သတ်ဖြတ် ခြင်း ခံခဲ့ ရပါတယ်။
ထို သတ်ဖြတ်မှု့ကြီး ကြောင့် ဟစ်တလာ အနေ နှင့် ပိုလန် ကို အလျင်အမြန် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက် ပါတော့ တယ်။
ဒီကိစ္စ ကို သမိုင်းဆရာ အတော်များများ ဖုံးဖုံးဖိဖိ ရေးသား သလို အချက်အလက် ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်း တွေ ကိုလည်း ဖျက်ဆီးခဲ့ ကြတာ ကြောင့် ကမ္ဘာ မှာ လူသိ နည်းသော ကိစ္စ နှင့် စစ်ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ကွင်းဆက် ကို ဖြတ်ပြီး စစ်နိုင် သူတို့ ထုံးစံ အတိုင်း ဂျာမနီ နာဇီ ဟစ်တလာ ကိုသာ အပြစ်ပုံ ချပြီး ရေး သား ထားခဲ့ ကြ ပါတယ်။
ထိုသို့ ဂျာမန် အနွယ်ဝင်တွေ ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ် ခဲ့တဲ့ ပိုလန် လူမျိုး အစိုးရ နှင့် အထူးသဖြင့် ပိုလန် ဂျူးတွေ ကို ဟစ်တလာ ရဲ့ နာဇီ ဂျာမန်တွေ က ပိုလန် ကို သိမ်းပိုက်ပြီး နောက်ပိုင်း လက်စား ချေခဲ့ တာ ကိုတော့ ကမ္ဘာက မမေ့နိုင်အောင် ယနေ့အထိ ထုတ်ဖော် ကြလျှက် ရှိပါတယ်။
အနောက် ပရပ်ရှား မှာ ရှိသည့် ဂျာမန် အနွယ်ဝင် အိမ်များ ကို ပိုလန် အစိုးရ စစ်သားများ နှင့် ဇိုင်ယွန်နစ် ဂျူးများ က အကြမ်းဖက် လုယက်၊ မီးရှို့၊ မုဒိမ်းကျင့် ကြယုံမျှ မက အမျိုးသားများ ကို မြို့ပြင် ထုတ် လက် နောက်ပြန် ကြိုးတုတ် ပြီး တန်းစီ ပစ်သတ် ခဲ့ ပါတယ်။
ဒီလို အခြေအနေဆိုး အောက် မှာ ဟစ်တလာ အနေ နဲ့သူ့လူမျိုးတွေ ကို ပိုလန် ကနေ ကယ်မထုတ် နိုင်ရင် သို့တည်းမဟုတ် စစ်ရေးအရ ဝင်ရောက် မတားဆီး နိုင်ဘူး ဆိုလျှင် သူ့လူမျိုး အားလုံး သေချာပေါက် အသတ်ခံ ရမယ် ဆိုတာ ကို စိုးရိမ်မှု အပြည့် ရှိ နေသည်။
အကယ်၍ စစ်ရေး အရ တုန့်ပြန် ပြန်ရင် လည်း ပိုလန် အစိုးရ ရဲ့ကျောထောက် နောက်ခံ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ် ၊ အင်္ဂလိပ် တို့နဲ့ အသေအချာ ထိပ်တိုက် တိုးမယ် ဆိုတာ တွက်ချက် လို့ ရပေ မယ့် ဆိုဗီယက် ရုရှ က ဝင်ပါ မည်လော (သို့) လက်ရှောင် နေမည် လား ဆိုတာ ကို ချီတုံ ချတုံ စဉ်းစားရ ကြပ်နေတာ ကြောင့်၊ ရုရှ ပါဝင် မလာနိုင်အောင် ဂျာမန် နိုင်ငံခြား ရေး ဝန်ကြီး ရစ်ဘင်ထရော့ ( Joachim von Ribbentrop ) ကို မော်စကိုသို့ စေလွှတ် ပြီး ရုရှ ခေါင်းဆောင် စတာလင် ( Joseph Stalin )၊ နိုင်ငံခြားရေး ကော်မစ်စာ မိုလိုတော့တို့ နှင့် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
ရစ်ဘင်ထရော့ ၏ ကြိုးပမ်းမှု့ကြောင့် “ဂျာမန် – ဆိုဗီယက် မကျူးကျော်ရေး စာချုပ် ( German-Soviet Nonaggre-ssion Pact) ကို စစ်ကြီး မဖြစ်ခင် တစ်လ အလို ၁၉၃၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက် မှာ အောင်မြင်စွာ ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့ ပါတော့တယ်။
ပထမ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း မှာ သာမန် ဆက်သား စစ်သား လေး ဟစ်တလာ ၏ နှလုံးသားထဲ စွဲမြဲ အမာရွတ်ထင် ကျန်ရစ်နေသော ဂျာမနီ စစ်ရှုံး စေသည့် “နောက်ကျော ဓားထိုး ခံရခြင်း” မှ လွတ်ကင်း အောင် ယခု ဆိုလျှင် ဆိုဗီယက် ရုရှ ကို နောက်ကျောလုံအောင် ချွေးသိပ် နိုင်ခဲ့ပြီ မို့သူ့လူမျိုး အားလုံး ကို ကယ်တင်ရန် နှင့် အဖု အထစ်မရှိ နောက် ခြေလှမ်း တစ်လှမ်း လှမ်းရန် အဖက်ဖက် က အဆင်သင့် ဖြစ်ခဲ့ပြီ မဟုတ် ပါလော။
ထိုသို့သော နောက် ခြေလှမ်း တစ်လှမ်းကတော့……။
နံနက် လင်းအားကြီး ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ် မှာ ဂျာမန် စစ်တပ်ကြီး နယ်စပ် ကျော်ဖြတ်ပြီး ပိုလန်ကို အလုံး အရင်း နှင့် ဝင်တိုက် ပါတယ်။ German Luftwaffe လို့ခေါ်တဲ့ လေတပ် နှင့် ပိုလန် ရေတပ် အခြေစိုက်ရာ ဘော်လ်တစ် ပင်လယ်ထဲ ရှိ စစ် စခန်း တွေကို ဂျာမန် စစ်သင်္ဘော၊ ရေငုပ် သင်္ဘော (U-boats) တွေ နဲ့ပါ မြေပြင် တိုက်ခိုက်ချိန် နှင့် တစ်ချိန်တည်း လိုလို တိုက်ခိုက် ပါတယ်။
ဂျာမန် စစ်သည်ပေါင်း တစ်သန်းကျော် နှင့် အကြီး အကျယ် ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း အကြောင်း က ပိုလန် အစိုးရ ထက် ၎င်းတို့နောက်မှာ့ မြှောက်ပေး နေတဲ့ အင်္ဂလိပ် နဲ့ ပြင်သစ် ကို အင်အားပြခြင်း က အဓိက အချက် ဖြစ်တယ်။
တစ်ချိန်တည်း မှာ ဟစ်တလာက ကရိုးလ် အော်ပရာ ဇတ်ရုံ ကို ရိုက်ခ်ျစတက် လွှတ်တော် လုပ်ပြီး ကမ္ဘာ ကို မိန့်ခွန်းပြော ကြားပါတယ်။
သာမန်ထက် ထူးခြားပြီး အံ့မခန်း သော သူ၏ မိန့်ခွန်း ထဲတွင် ” ဒန်းဇစ်မြို့ဟာ ယခင် ကတည်း က ဂျာမန် ယဉ်ကျေးမှု့နဲ့ ထွန်းကား လာတဲ့ ဂျာမန်မြို့ ဖြစ်တယ်။
ဒီ ကနေ့ ကိုယ့်မြို့ ကို ကိုယ်ပြန် ယူတယ်။ ပိုလန် သံအမတ် ကို လွန်ခဲ့ တဲ့ သုံးပတ် အလို အချိန် ကတည်း က သတိပေး ထားတယ်၊
ဒီလို သာ ကျွန်ုပ်တို လူမျိုးတွေ ကို ခင်ဗျားတို့ တစ်တွေ ဆက်လက် နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်း နေမယ်၊ ဒန်းဇစ်မြို့ကို မောင်ပိုင် စီးပြီး စီးပွားရေး အရ ထိုးနှက် နေမယ် ဆိုရင် တော့ ကျွန်ုပ်သီးခံ နိုင်တော့မယ် မဟုတ်ဘူး လို့ ပြောခဲ့တယ်၊
ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်း ကြရ အောင်လို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြောခဲ့ ပေမယ့် ဂရုမစိုက် လစ်လျုရှု့ တဲ့ အဖြေ ကို ခင်ဗျားတို့ ဒီနေ့ရကြ တာ ဖြစ်တယ်” ဟု ပိုလန် အစိုးရ ကိုလည်း တိုက်ရိုက် ရည်ညွှန်း ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ်။
ယခု အချိန် မှာတော့ ဘယ်အရာက မှ သူ့ရဲ့ စစ်တပ်ကြီး ကို မဟန့်တားနိုင် သလို ပိုလန် တစ်နိုင်ငံလုံး တွေ့မြင် နေရတာ တော့ ဗုံးတစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ကျရောက် ပေါက်ကွဲ သေကြေ ပျက်စီးခြင်းနဲ့သာ နှစ်ပါး သွားနေရ ပါပြီ။
ဂျာမန် လက်နက်ကိုင် တပ်မတော် ကို အထင်သေး တွက်ချက်မှု့ မှားခဲ့တဲ့ အတွက် ပိုလန် အစိုးရ တန်ဘိုး ကြီးစွာ ပေးဆပ် ခဲ့ရ သလို ဂျာမန် လို Blitzkrieg
( Lightning War / လျှပ်တစ်ပြက် ထိုးစစ်၊ ပြောက်ကျားစစ်) လို့ခေါ်တဲ့ ရှောင်တခင် လျင်မြန် တဲ့ အဟုန် နဲ့ ရုတ်တရက် မထင်မှတ်ဘဲ ထိုးစစ် ဆင်သော စစ်နည်း ဗျူဟာ ကို ပိုလန် စစ်တပ် တွန်းလှန် နိုင်စွမ်း မရှိပါ။
စစ်ကြီး မဖြစ်ခင်လေး အချိန် မှာ ပိုလန် နိုင်ငံထဲ ရှိ ဂျာမန် လူမျိုး ( ၅၈,၀၀၀ ) ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဲ့ တဲ့ ကိစ္စကို ပိုလန် ကို သိမ်းပြီး မဆိုင်းမတွ အက်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း ၍ အရေးတကြီး ဆောင်ရွက် ပါတယ်။
၁၉၃၉ ခု၊ ၃၁ ဩဂုတ် နှင့် ၆ ရက် စက်တင်ဘာ အကြား စက်တင်ဘာ (၃) ရက်၊ ဘရွန်းဘတ် (Bromberg) မြို့ မှာ အထင်ကရ အထွတ်အထိပ် အကြီးအကျယ် သတ်ဖြတ် ခဲ့တဲ့ နောင်သော အခါ “သွေးစွန်းသော တနင်္ဂနွေ” (Bloody Sunday) လို့ သိခဲ့ ကြတဲ့ ဂျန်မန် လူမျိုးတွေ ကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ် ခဲ့မှု့နှင့် ဆက်လက် ၍ ကျူးလွန် နေ ကြတာ ဟာ ဂျာမန် တပ်တွေ Lowitsch မြို့ကို ရောက်ရှိ တဲ့ စက်တင်ဘာ (၁၈) ရက် အထိ ရှိနေ ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ရောက် ရှိလာ ချိန်မှ သာ ဒီ သတ်ဖြတ်မှု့ တွေ ကနေ ဂျာမန် တိုင်းရင်း သား တွေ လွတ်မြောက် ခဲ့ကြ ရ ပါတော့တယ်။
ဒီ အကြောင်းတွေ ကိုလည်း ကမ္ဘာ့သမိုင်း မှာ ယနေ့အထိ ထင်ထင်ရှားရှား ဖော်ပြမှု့ မရှိဘဲ ပျောက်ဆုံး လျှက် ရှိနေ သလို ထိုသို့ ရက်စက် ယုတ်မာသော အဖြစ် ကို ကျူးလွန် သူ အပေါင်း ပြစ်မှု ထင်ရှား သဖြင့် ဂျာမန် လက်ဖြောင့် တပ်သားတို့၏ ပစ်သတ်ခံ ရခြင်း ဖြင့် အသက် ကို အသက်ဖြင့် သာ ပြန်လည် ပေးဆပ် ခဲ့ရ ပါတော့တယ်။
Ref:သူရိယနေဝန်း ဂျာနယ် – «AndrewSoe» သမိုင်းက မပြောသော ဟစ်တလာ အကြောင်းများ အခန်းဆက် မှ
VIA: Eaint Myat Chel
← “နိုင်ငံ့ ရန်သူရဲ့ အမြစ် ကိုလည်း ဖြတ်ရမယ်၊ အညွန့်ကို လည်း ဖြတ် ရမယ်”
မစ္စယန်ဟီးလီ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက် ကြောင်း အရေးကြီး အဆို လွှတ်တော် တင် →